အောက်စဖို့ဖိနပ် - ဤဗြိတိသျှဖက်ရှင်၏ ၀ တ်စုံကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့ဝတ်ဆင်ရမည်နည်း စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
အောက်စဖို့ဖိနပ် - ဒီဗြိတိသျှဖက်ရှင်ဂန္ထဝင်ကိုဘယ်အချိန်မှာဝတ်ရမယ်
လူကြီးလူကောင်းရဲ့ကလပ် | | Calzado, ပုံ
အကယ်စင်စစ်သင်သည်အကြောင်းကိုကြားရပြီ အောက်စဖို့ဖိနပ် မင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်မရှိရင်တောင်မှဖိနပ်စတိုးဆိုင်မော်ဒယ်လ်တွေနဲ့သူတို့ကိုခွဲခြားလို့မရဘူးဆိုရင်တောင်။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင် Oxford ဖိနပ်သည်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် ခြေကျင်းအောက်တွင်ရောက်သောဇာများပါသောတံခါးပိတ်ဖိနပ်။ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများကြားတွင်လူကြိုက်များလာသည့် ၁၇ ရာစုကတည်းကသူတို့တည်ရှိခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့ကိုထိုနည်းအတိုင်းသိခဲ့ကြသည်။ သူ၏စတိုင်သည်လူကြီးလူကောင်းတို့၏တရားဝင်ဖိနပ်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုပြုရန်တွန်းအားပေးခြင်းခံခဲ့ရသည် ယနေ့ဆက်လက်ဝတ်ဆင်နေဆဲသော timeless လမ်းကြောင်းသစ်.
အောက်စဖို့မော်ဒယ်အတွင်းပိုင်း အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူအချို့သောမျိုးကွဲရှိပါတယ် သားရေထဲရှိအပေါက်များသို့မဟုတ်အရာ ၀ တ္ထုပေါ်ရှိဖောက်ထားသည့်ပုံဆွဲမှုများရှိသည့် Full Brogue ကဲ့သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ စပိန်နိုင်ငံတွင်၎င်းကိုလက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်း၊ ဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခုတ်ခြင်းဟုလူသိများပြီးထိုတွင်းပေါက်များ၏မူလလုပ်ဆောင်ချက်မှာလယ်ပြင်၌သူတို့၏ခြောက်သွေ့မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဖြစ်သည်ဟုအိုင်းရစ်တောင်သူလယ်သမားများကပြောကြားခဲ့သည်။ စိုထိုင်းမှုအတွက်ဤဖြေရှင်းချက်သည်အလွန်လူကြိုက်များမှုနှင့်အဓိကအားဖြင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြွေးတင်နေသည်။
သူ၏ကျော်ကြားမှုသည် ၁၉၃၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဖြစ်သည် သူတို့ကိုဖိနပ်၏ထိပ်သို့မြှောက်။ တရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သောအက်ဒွပ် VII ဝေလမင်းသား၏လက်မှဖြစ်သည် ဝတ်ဆင်သောဖိနပ် မည်သည့်အခါသမယမဆို, မကြာမီစီးပွားရေးသမားများသည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဝတ်စုံများနှင့် ၀ တ်ဆင်သည့်သူတို့၏စတိုင်ကိုတုပပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏အသွင်အပြင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သူတို့ကိုမွေးစားခဲ့သည်။ Church, Dolce & Gabbana သို့မဟုတ် Salvatore Ferragamo တို့သည်ဖွံ့ဖြိုးရန်အဆိုပြုထားသောဖိနပ်အိမ်များဖြစ်သည် လူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးအောက်စဖို့ဒဖိနပ်.
၎င်း၏ဘက်စုံသုံးမှုသည်အောက်စ်ဖို့ဒ်မော်ဒယ်၏အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည် ၎င်းသည်နေ့စဉ်အလုပ်များအတွက်နှင့်ညအချိန်တွင်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့သွားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်အစဉ်အလာတစ်ခုစီအတွက်မှန်ကန်သောအရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသရွေ့အညိုရောင်သည်အနက်ရောင်ထက်အနည်းငယ်ပိုအလွတ်သဘောဖြစ်သည်။ ဖိနပ်၏အလှဆင်ခြင်းသည်အထူးအခါသမယတစ်ခုအတွက်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သောရုံးခန်းသို့သွားခြင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်သည်။
အဝတ်အစားကိုညှိနှိုင်းထားရန်အပိုင်းအစတစ်ခုစီအတွက်အခြေခံအရောင်များကိုသာရွေးချယ်ပါ။ အညိုရောင်သားရေအောက်စဖို့ဒ်သည်မီးခိုးရောင်၊ အညိုရောင်သို့မဟုတ်ရေတပ်ဝတ်စုံများနှင့် တွဲဖက်၍ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်ဝတ်ဆင်မည့်အစားအောက်စ်ဖို့ဒ်သည်ဤအရောင်များနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုသောအခါ ပို၍ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီးသင့်အားအမြင်အာရုံကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်။
၎င်း၏ဘက်စုံမှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီမော်ဒယ်က၎င်း၏ကြော့ရှင်းဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲလုံးဝ unisex ဖြစ်ပါတယ်။ အ brit နိူးထမှု kkega ယခုဆောင်း ဦး ရာသီသည်အားကြီး။ အောက်စ်ဖို့ဒ်သည်အင်္ကျီများနှင့်အ ၀ တ်များဝတ်ဆင်ရုံဖြင့်ဖိနပ်မဟုတ်တော့ကြောင်းပြသရန်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်အတွက် Cardigan၊ ကျယ်ပြန့်သောဘောင်းဘီသို့မဟုတ်လေးရှပ်နှင့်ရှပ်အင်္ကျီဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည် dandy နယူးယောက်၏ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များဖြစ်သောအစွဲအလန်းကိုသတိရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » Calzado » အောက်စဖို့ဖိနပ် - ဒီဗြိတိသျှဖက်ရှင်ဂန္ထဝင်ကိုဘယ်အချိန်မှာဝတ်ရမယ်
pablo the cachero ဟုသူကပြောသည်
pablo el cachero ကို အကြောင်းပြန်ပါ။